Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Hudheelka Cusub ee Blossom Houston ayaa albaabada u furay
Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Blossom Hotel Houston, hantida raaxada ee cusub ee Houston, waxay ku faraxsan tahay inay u furto maanta martida iyo dadweynaha. Waxay ku yaalliin 7118 Bertner Avenue iyo NRG Stadium ee deriska la ah, Xarunta Caafimaadka Texas iyo meelaha madadaalada ee caanka ah, huteelka casriga ah wuxuu rajeynayaa inuu soo bandhigo bulshada Houston iyo dad waynaha weeyn si ay u helaan adeegyo heer caalami ah, cunto wanaagsan, iyo kulan sare iyo goobo dhacdooyin.
Hudheelka raaxada ee cusub ee Houston oo jilicsan ayaa ku furmay adeegyada raaxada, qolalka martida iyo qolalka, barkada saqafka sare, iyo qorshayaasha fikradaha cuntada oo ay hogaaminayaan laba cunto kariye oo Michelin-xiddig leh.
Hudheelka waxa uu soo bandhigaa waqti xaddidan oo ku saabsan wakhtiga fasaxyada.
Blossom Hotel Houston waxaa lagu abaalmariyay Abaalmarinta Halyeyga COVID iyadoo lagu aqoonsanayo taageerada ay siiso bulshada deegaanka inta lagu jiro aafada iyo duufaanta jiilaalka.
"Kadib waqti isku day ah oo magaaladayada iyo gobolkayaga 18-kii bilood ee la soo dhaafay, waxaan joognay Blossom Hotel Houston aad ayaan ugu faraxsanahay in ay u soo bandhigaan hantida dadweynaha," ayuu yiri Albert Ramirez, maamulaha guud ee Blossom Hotel Houston. "Waan ku faraxsanahay in aan siino fursadaha shaqo ee bulshada oo aan gacan ka geysanno dib u soo nooleynta dhaqaalaha maxalliga ah dhammaan annaga oo siineyno martidayada joogitaan raaxo leh oo raaxo leh oo leh adeegyo iyo adeegyo heersare ah."
Blossom Hotel Houston waxaa dhawaan la gudoonsiiyay Abaalmarinta Halyeyga COVID ee ay bixiso Rugta Ganacsiga Eeshiya ee Houston iyadoo lagu aqoonsanayo taageerada ay siiso bulshada deegaanka inta lagu jiro masiibada iyo duufaantii jiilaalka horaantii sanadka. Hudheelka waxa kale oo uu ku faraxsan yahay in loogu magacdaro Hudheelka Rasmiga ah ee kooxda Kubadda Miiska ee USA. Sida ku cad heshiiska, labiska Kooxda Kubadda Miiska ee Mareykanka ayaa muujin doona astaanta Hotelka Blossom ee Houston.
Blossom Hotel Houston waxa kale oo uu ku faraxsan yahay in uu ku dhawaaqo iskaashi lala yeesho Bulshada Astronomical Society si ay u martigeliso dhacdooyin taxane ah oo xiddigo leh oo loogu talagalay in la qabto Khamiista, Noofembar 11 laga bilaabo 6:30 ilaa 8:30 pm Dhacdada "Fiidka Dayaxa", taas oo u furan martida iyo dadweynaha, waxay ka dhici doontaa barkada saqafka sare ee hudheelka iyada oo leh muuqaal magaalo oo cajiib ah iyo gelitaanka habeenkii oo aan cidhiidhi ahayn. Dhacdadii dayrta waxa ay bilawday taxane cusub oo la shaqaynaysa ururka aan faa'iido doonka ahayn halkaas oo dakhliga lagu deeqay ay ka faa'iidaysan doonto wacyigelinta bulshada iyo dadaalka waxbarashada ee Bulshada Astronomical Society.
Laga soo bilaabo goobta dhexe ee u dhow garoonka NRG, degmada madxafka caanka ah, dukaamaysiga, cuntada iyo madadaalada, hudheelka cusub wuxuu soo dhawaynayaa martida si ay u ogaadaan astaamihiisa xiisaha leh ee ku hareeraysan iyo sidoo kale inay dareemaan dib u cusboonaysiin iyo dib u cusboonaysiin goobta raaxada leh, soo dhawayn heer caalami ah, iyo ganaax. wax cunid. Intaa waxaa dheer, sida hudheelka raaxada ee kaliya ee deriska la ah xarunta ugu weyn ee caafimaadka adduunka, hudheelku wuxuu siinayaa martida khibrad sare oo soo dhaweyn ah inta ay ka qaybgalayaan ballamaha iyo hababka muhiimka ah.
Hudheelkan oo ka kooban 16 dabaq, kaas oo si heersare ah u soo bandhigi doona furmaya horraanta 2022-ka, waxa ay bixisaa 267 qolal marti ah oo qurux badan iyo suuliyaal iyo in ka badan 9,000 cagood oo laba jibbaaran oo kulan dabacsan iyo goobo dhacdo. Goob ku taal, xarun jimicsi oo casri ah oo ay ku qalabaysay Peloton® waa la heli karaa martida 24-saac maalintii, iyo sidoo kale adeega concierge ee luqadaha badan kaas oo buuxin doona codsi kasta oo marti ah oo leh heer adeeg shakhsiyeed laga filayo hoteelada ugu fiican. Hudheelka waxa kale oo uu leeyahay barkad saqafka sare ah oo cajiib ah iyo qolka fadhiga oo ku faanaya aragtiyo xaaqid ah oo ku saabsan magaalada hoose ee Houston.
Naqshadaynta casriga ah ee guriga waxaa ka mid ah qaab la safeeyey, qaab yar oo leh palette midab dayax-gacmeed leh oo muujinaya qalab nalal cajiib ah, badan oo ah Carrera marmar, saqafyo saxan oo gaar ah, sagxadda alwaax xeebta iyo muuqaalo qurxoon oo guriga oo dhan ah. Qolalka martida iyo qolalku waxay ka kooban yihiin goobo nololeed oo ballaadhan oo leh iftiin dabiici ah oo badan, waxaana lagu qalabeeyay Wi-Fi dhammaystiran, Samsung Smart TV-yada ugu sarreeya, timo-qallajiyeyaasha Dyson, kafeega Nespresso, Wargeysyada Dijital ah ee PressReader®, iyo musqullo marmar ah oo leh madaxyada qubayska roobka iyo adeegyada gaarka ah ee Aqua Di Parma™ si loo daboolo loogana dhaafo baahiyaha ganacsiga, wakhtiga firaaqada iyo socdaalayaasha diirada saaraya caafimaadka.
Ku faanista in ka badan 9,000 cagood oo laba jibaaran oo shirar ah iyo goobo munaasabado ah, Blossom Hotel Houston waxay leedahay goob munaasabado badan oo shaqaynaysa oo loogu talagalay shirarka ganacsiga ee dhammaan qaybaha kala duwan iyo warshadaha iyo sidoo kale munaasabadaha bulshada. Qolka Ballroom-ka ee quruxda badan ee Luna oo leh daaqado ilaa saqafka sare leh waxa lagu qalabeeyay awood maqal-muuqaal oo casri ah si ay si fudud u dejiso shirarka iyo shirarka casriga ah oo ay ku maaweelin karto ilaa 250 qof. Hudheelka waxa uu bixiyaa sagaal goobood oo dheeraad ah oo leh iftiin dabiici ah iyo qorshooyin dabaq ah oo dabacsan. Aroosyada saxeexa ee lagu farsameeyay fanka, Blossom Hotel Houston waxa uu leeyahay habayn kala duwan oo loogu talagalay munaasabadaha gaarka ah ee lamaanaha.
Horraantii 2022, Blossom Hotel Houston waxa ay qorshaynaysaa in ay siiso martida iyo dadka deegaanka laba fikradood oo cunto oo kala duwan iyada oo lala kaashanayo laba cunto kariyayaal ah oo Michelin-xiddig leh. Gurigu waxa kale oo uu ka koobnaan doonaa qolka fadhiga soo dhawaynta ah kaas oo u adeegi doona cuntooyinka cuntada lagu kariyo iyo cabitaanka ee ay kormeerayaan cunto karisyada, iyo sidoo kale cuntada qolka dhexdiisa ee martida bixiya qiimaha caalamiga ah iyo kan Maraykanka. Faahfaahinta barnaamijyada cunto karinta iyo cunto kariyayaasha ka dambeeya maqaayadaha ayaa dhawaan lagu dhawaaqi doonaa.
Blossom Hotel Houston waxa uu ku yaalaa 7118 Bertner Avenue ee Houston, Texas. Iyada oo ay weheliso furitaanka jilicsan, hudheelku waxa uu soo bandhigayaa xayaysiisyada fasaxyada inta u dhaxaysa hadda iyo Diseembar 31, 2021. Martidu waxay ballansan karaan xafladaha shirkadaha fasaxa iyo munaasabadaha qadada gaarka ah laga bilaabo USD95 qofkiiba wixii ka dambeeya. Booska qolalka ayaa la heli karaa laga bilaabo USD289.00 wixii ka dambeeya oo ay ku jiraan baarkin bilaash ah.
Si aad u ballansato iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Blossom Hotel Houston, fadlan booqo BlossomHouston.com.
Ku saabsan Blossom Hotel Houston
Blossom Hotel Houston waxa uu bixiyaa waayo-aragnimo caalami ah oo hal abuur leh oo si qoto dheer ugu xididaysan Magaalada Space. Hudheelka waxa uu dhigayaa martida dhawr tallaabo u jirta xarunta ugu weyn ee caafimaadka adduunka iyo ganacsiyada ugu sarreeya ee Houston iyo goobaha madadaalada, iyo sida hudheelka raaxada ee ugu dhow NRG Stadium, waxa kale oo uu daqiiqado u jiraa meelaha caanka ah ee Houston. Haddi ay u safrayaan baahiyo caafimaad, ganacsi ama raaxo, martidu waxay ku raaxaysan karaan kala duwanaanshaha Houston, taas oo sidoo kale ka muuqata huteelka huteelka ee xididada hawada sare ee magaalada, iyada oo ka faa'iidaysanaysa dukaamaysiga tafaariiqda ee hudheelka, laba makhaayadood oo foojignaan leh, adeegyo aan isbarbar dhigin. iyo adeegyada, qolalka martida ee raaxada iyo dhacdooyinka badan iyo goobaha shirarka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo BlossomHouston.com, ama na soo raaci Facebook iyo Instagram.